Ny tranga hafahafa an'i Stepmanía | Avy amin'ny Linux
Ny tranga hafahafa an'i Stepmanía
eliotime3000 | | Games
Miarahaba antsika rehetra. Androany aho tonga hiresaka aminao momba ny lalao karazana dihy simulator izay mety efa nilalaovanao, na henonao tany.
Antsoina izany Stepmania, mampiasa Fahazoan-dàlana MIT ary izy io dia ao amin'ny kinova fahaefatra ao amin'ny sampana farany ary ny kinova fahadimy ao amin'ny sampana beta vaovao.
Ho fanampin'izay, misy vondron'olona mpampiasa sy mpandray anjara lehibe izay manampy hira, dingana, ary misy aza tambajotram-pifandraisana izay mizara ny naotiny ary navela hitarika olona maro kokoa amin'ity karazana lalao video ity izay natomboka tamin'ny angano ankehitriny Dance Dance Revolution de Konami.
Ary tsy hiresaka marimarina momba ny fomba filalaovana azy aho, fa ny fomba nanatanterahana azy ara-barotra, na dia tsy maintsy nandalo fitoriana ratsy aza izy io, ary taty aoriana, "fanavotana" nataon'ny orinasa Koreana Tatsimo izay horesahiko etsy ambany .
2 Fampiharana henjana amin'ny fivarotana azy
2.1 Amin'ny milina DDR
3 Amin'ny milina PIU
Tamin'ny voalohany, ity lalao video ity dia teraka ho "fanahafana" an'ilay lalao voalaza etsy ambony Dance Dance Revolution, hatramin'ny mahazatra, ny DDR dia nisy be dia be tao amin'ny milina arcade toy ny amin'ny consoles toa ny PlayStation sy / na XBox sy Nintendo.
Ary tamin'ny fotoana nivoahany StepMania, tsy nisy kinova DDR ofisialy ho an'ny PC, noho izany dia nivadika ho loharano misokatra izy ireo ary ny kinova tamin'izany dia somary primitive.
Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, ireo mpankafy lalao video Paompy Nomeny koa ny cents roa-dry zareo mba hampiharana ny mekanika amin'ity lalao ity (tsy toy ny DDR izay mampiasa zana-tsipìka 4, ny PIU dia mampiasa zana-tsipika misy zana-tsipìka 5 miendrika antsy, izay mampifanaraka ny fomba fandihizana rehetra).
Misaotra an'izany, ireo mpankafy DDR toa ny PIU dia nanao kinova azo nalefa tamin'ny hira ankafizin'izy ireo, ary navoakan'izy ireo tao amin'ny Stepmanía aza ny famokarana mozika nataony.
fampiharana mikitoantoana amin'ny varotra ataony
Amin'ny milina DDR
Ny fampiharana ara-dalàna azy ao amin'ny masinina DDR dia mihoatra ny zava-nitranga fotsiny, satria ny sampana amerikanina an'i Konami no nanakana ny fampiharana an'ity lalao video ity tao amin'ny fork-barotra malaza indrindra, antsoina hoe Ao amin'ny groove, izay teraka ho vahaolana amin'ny fanohanana ara-teknika faran'izay mahantra nomen'i Konami ny milina fandihizana DDR any Andrefana, ankoatry ny nanjary nalaza noho ny fahasarotana avo lenta izay nifanohitra tamin'ny simulator mpandihy Konami voalaza etsy ambony.
Roxor Games, ny mpizara indrindra an'ity lalao ity, no niandraikitra ny fametrahana ity lalao ity tamin'ny milina DDR any Etazonia, ny antony lehibe nanapahan'i Konami hevitra hametraka andiana fitoriana sy fitakiana zon'ny mpamorona mba hampitsaharana ny fanitarana an'ity lalao video ity .
Andamiro Entertainment, ny orinasa Koreana Tatsimo lehibe tompon'ny lalao video Paompy, dia nanohana ireo mpamorona ITG miaraka amin'ny fanomezana ireo fitaovana ilaina mba hanamorana ny fizarana ny lalao amin'ny alàlan'ny valan-javaboary fialamboly.
Na izany aza, tamin'ny 2006, Konami dia nandray ny zon'ny anaran'ny lalao video fa tsy ny fanangonana hira, ny antony lehibe indrindra tsy nisian'ny fizarana fahatelo (ary namela ny tsenan'ny milina arcade tany Andrefana), ary izay Andamiro koa dia nanao andiam-pilalaovana PIU mifototra amin'ilay lalao video efa voatonona betsaka.
Ary toy ny hoe tsy ampy izany, ny iray tamin'ireo mpankafy ITG dia nahavita nanao kinova open source vonona hovaina sy / na hatsaraina amin'ny fiarahamonina antsoina hoe OpenITG, izay azo alaina ho an'ny OSX, Windows, ary GNU / Linux.
Amin'ny milina PIU
Rehefa avy niatrika andrana mahery vaika niaraka tamin'ny milina DDR sy Konami tany Etazonia izy, dia nandray andraikitra i Andamiro ary niantso ireo mpanamboatra ITG hahafahany mampifanaraka ny lalao video ho an'ireo milina PIU.
Nanomboka tamin'io fotoana io dia teraka ny saga Pump It Up Pro, izay fantatra amin'ny fampiakarana ny haavon'ny fahasahiranana amin'ity lalao video ity, ho fanampin'ny fampitomboana ny katalaogin'ny hira ITG ho fifalian'ny maro.
Na izany aza, satria ny mpankafy PIU sasany dia nanana fihetseham-po nifangaro tamin'ny saga nilaza, ka ny mpanakanto sasany izay niasa tamin'ny famoronana ITG dia nijanona hiara-miasa amin'i Andamiro amin'ny fizarana manaraka an'ny PIU mifototra amin'ny lalao video voalaza fa amin'ny dingana alpha (amin'ny teny hafa , Hampiasa Stepmania 5 Alpha izy ireo hampivelatra ilay lalao video voalaza).
Taorian'ny nanehoana azy tamin'ny toeran'ny beta tao amin'ny foibe filalaovana fialamboly, tamin'ny volana Janoary 2013, dia natomboka izy io Paompy tsy manam-petra, miaraka amin'ny lafiny mitovy amin'ireo kinova iraisampirenena natao tany Korea atsimo saingy amin'ny fomba mozika tsy mitovy amin'ny dikan-teny toa ny saga fiesta ary mitahiry ny haavon'ny fahasahiranana nananan'ireo teo alohany.
Tamin'ny faran'ny andro, ity lalao video ity dia nahavita nametraka ny tenany tamin'ny lafiny roa, na teo amin'ny sehatra fiaraha-monina na teo amin'ny sehatra ara-barotra, na dia ianao aza. Aza mino izany, ny milina fandihizana mampiasa ireo kinova ara-barotra amin'ny fampiasana Stepmanía ireo GNU / Linux Debian toy ny tafiditra ao anaty SO:
Izay ihany ny androany. Manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra kely natokana ho an'ity lalao Open Source fanta-daza ity ary tsy ny Valve irery no miloka amin'ny Linux amin'ny lalao video.
Mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Ny tranga hafahafa an'i Stepmanía
O_O Tsy fantatro izy. Tadidiko fony aho mpankafy filalaovana PlayStation 1, nisy lalao dihy tiako be (tsy tadidiko intsony ny anarany) .. Amin'ity herinandro ity aho hanandrana azy hahitana ny fomba fiasany 😀
Bust Groove? Eny, efa nilalao azy io aho tao amin'ny emulator, fa amin'izao fotoana izao ny kopian'ny F2P dia fantatra amin'ny anarana hoe LoveRitmo (nozarain'i Softnyx), ary Audition (Nozarain'ny vavahady lalao Axeso5.com). Ary teny an-dalana, ny Bust A Groove dia mitovy tsara ihany, saingy tsy nisy fomba nampifanarahana azy tamim-pahamendrehana tamin'ny pad DDR.
Ananako izany, ankoatr'izay dia nilalao arcade aho, ny Revolution 2 marina, miaraka amin'ny 2 amin'izy ireo ao an-drenivohitra Madrid (ny iray ao Puerta del Sol ary ny iray any amin'ny ivon-toeram-pivarotana La Gavia, eo amin'ny manodidina an'i Las Suertes / Gavia ao amin'ny ensanche de Vallecas), na dia tsy nilalao efa ela aza aho ary indray andro dia nanandrana aho, saingy tsy afaka namely ny zana-tsipìka XD
Ary ilay fandihizana, amin'ny alàlan'ny efitrano fitehirizana, mety indray andro any azoko atsanganina indray
Raha ny amiko, zara raha misy milina DDR vitsivitsy izay manakaiky ny tanàna ipetrahako (Villa María del Triunfo, Lima, Peru), ary indrisy, samy miasa amin'ny ITG izy roa. Tamin'ny zana-tsipìka, dia nahatratra azy hatrany amin'ny ambaratonga 7 aho (na tamin'ny milina DDR na PIU), fa tamin'ny ambaratonga 8, satria namadika ahy ny tongotra ary avo kokoa ny haavon'ny ezaka ara-batana ao amin'ny PIU (ary bebe kokoa ny cardio ao amin'ny DDR) .
Tsy niakatra avy any Normal mihitsy aho, tsy afaka ho vitako izany.
Raha ny tokony ho izy, tao amin'ny fantsona Youtube nataoko dia nampakatra horonantsary marobe tamin'ny fifaninanana kely iray izay nataontsika taona maro lasa izay, rehefa natomboka ny fikambanana, niaraka tamin'ny Revolution 2 tao amin'ny foibe fiantsenana iray hafa tao Madrid (tena ilay Volana Masina iray manontolo, sendra naneho hevitra momba io ) raha te hahita ianao dia ampio ny sasany ao amin'ilay lahatsoratra ^^
Miala tsiny fa sarotra ny tiako holazaina
Raha mijery ireo horonantsary DDR aho dia toa hitako fa ny haavon'ny “sarotra” dia mitovy amin'ny haavo ITG 6/7, ka azoko atao ny mamely ny zana-tsipìka amin'ny pad.
Na izany na tsy izany, antenaiko fa afaka milalao amin'ny DDR voalohany aho (raha hitako io, mazava ho azy).
carlisle dia hoy izy:
Ok, ahoana no fomba hanangonana azy amin'ny Linux Mint, Petra?
Ao amin'ilay tranokala Stepmanía ihany dia manome anao ny kinova efa voaangona ary vonona ny hihazakazaka ary koa ny pejy Google Code hahafahanao mampiasa ny kaody loharano ary manangona azy io, ary manadio ireo bibikely (raha hitanao izany).
Na izany aza, ny lalao dia mahomby kokoa amin'ny Linux noho ny Windows.
Lahatsoratra tena tsara, be mpanome vaovao.
amin'ny fomba fiomanana Elav handao an'i Arch dia efa akaiky eto.
rcasmay dia hoy izy:
Tiako ity lalao ity, efa nianatra nitady ny asany rehetra tamin'ny fanovana ny ambadika aho, ao anatin'izany ny hira sy ny famokarana ny lokako manokana. Na izany aza, zavatra iray izay nanelingelina ahy foana dia ny fahafantarana hoe iza amin'ireo rindrambaiko novolavolaina, satria mety hahaliana ny mamorona ny kinovako manokana amin'ity lalao ity, koa raha misy mahalala ny fomba sy ny programa namolavolana azy dia tiako ny fampahalalana.
Mamaly an'i rcasmay
Ampidiro ao amin'ny Raspberry Pi amin'ny Arch Linux ny XBMC
Pou: mascot an'ny Tamagochi ho an'ny Android-nao